Okukhethekile kwesitayela sesimanje ngokuthinta idwala: Rock Chic | Amadoda aSitayela
UPaco Maria Garcia | | Amathrendi
Para muchos, idwala isitayela nokubukeka kokucasula nokukhohlisa, esivumela ukuthi sikhiphe lelo hlangothi "elinamandla" sonke esiliphatha ngaphakathi.
Isitayela seRock Chic kubafana sinokuthintwa okunolaka, noma ngabe kusetshenziswa amabhuzu aphakeme. Ingabuye igqokwe ngamateki, inikeze umoya wobusha futhi okhululekile.
Ngokuphathelene nezesekeli, okuvame kakhulu kwiRock Chic yizitashi, iziphambano nezingebhezi. Konke kuncike kulokho ngamunye afuna ukufaka isandla kwisitayela sakhe, okuyi kungadonsa amehlo, kuvuse inkanuko futhi kubhekele phansi ukubukwaz,
1 Inhlanganisela nezinye izingubo
2 Izingubo zesitayela seRock Chic
3 Yiziphi izesekeli ezingakhethwa kulezi zingubo ze-Rock Chic?
Inhlanganisela nezinye izingubo
Ngempela ukuze ugqoke isitayela se-Rock Chic akudingeki ukhishwe ngezingubo ezithile, kepha ungayihlanganisa futhi uyivumelanise nesitayela sakho. Ngale ndlela, idwala lingahlanganiswa nezingubo nezingubo zezitayela ezahlukahlukene.
Lokhu kubukeka kwe-Rock Chic Ilungele amadoda akhetha isitayela esingajwayelekile kepha esisebenza kahle ngasikhathi sinye. Uyindoda yekhulu lama-XNUMX, elisemadolobheni, okulula ukubonwa kulo iklabhu yasebusuku.
Izingubo zesitayela seRock Chic
I-jean enhle ingubo eyisisekelo yalo mkhuba. Kulesi sitayela, i-T-shirt iyona engcono kunazo zonke, uyihlanganisa nejacket yesikhumba noma i-blazer elula, kuya ngokuthi ufuna ukufeza ukubukeka okusemthethweni noma okunesibindi.
Njengoba sibona, kumkhuba weRock Chic ijakhethi yesikhumba ingubo yesithonjana esetshenziswa ngamahembe, amajezi, izikibha, noma ukuxubana okunesibindi kwalezi zinto. Ziyizambatho zethoni yakudala, enezingubo ezigugile, noma zinezindawo ezibolile.
Yiziphi izesekeli ezingakhethwa kulezi zingubo ze-Rock Chic?
I-Los izesekeli zakudala noma zokuvuna zingabaphelelisi abahle kakhulu ekubukekeni kwe-rocker. Noma ngabe ibhande eligugile, iRolex yesitayela sokuvuna, ezinye izibuko zelanga ze-retro, njll. Kunemibono eminingi.
Kule nkambiso, isikhumba imvamisa siyinto esetshenziswa kabanzi, ngenxa yemigqa yayo eqondile, ukuheha kwayo nobuntu bayo.
Imithombo yesithombe: Pinterest / adin-scs.es
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Uyasazi isitayela seRock Chic sabesilisa?
Faka umbala obomvu ekubukekeni kwakho kulo Khisimusi nale mibono